Fanononana 8 tena manentana ny fanahy izay aroson'ny Adobe ho an'ireo mpandraharaha hanomboka ny taona | Famoronana an-tserasera
Hanomboka taona vaovao isika ary miaraka aminy dia azoko antoka fa maro aminareo no hanomboka tetikasa vaovao ary hanomboka hevitra ara-barotra tsara. Noho izany, mba hahazoana hazakazaka sy hanombohana dingana vaovao miaraka amina firosoana dia nanapa-kevitra ny hizara aminareo an-tsafidy teny miisa valo tena manome aingam-panahy izay nozarain'i Adobe avy tao amin'ny tranokalany aho.
Fikirizana, fiheverana diso fanantenana ary fanantenana Izy ireo dia singa tena ilaina hanatratrarana ny tanjontsika ary tsy maninona ny mijanona mba hamenoana ny baterintsika hanohy hiasa sy hanome ny tsara indrindra amin'ny tenantsika.
Ny fotoana mampatahotra dia eo alohan'ny hanombohanao fotsiny. -Stephen King
Tompon'ny fihetsem-po, fantatr'i Stephen King fa tsy misy zavatra mahatsiravina kokoa noho ny pejy banga.
Ny drafitra voalohany amin'ny zava-drehetra dia mahadona. -Ernest Hemingway
Tsarovy ireto teny tsotra ireto ary tohizo fa aza manaiky ho resin'ny tsindry.
"Tsy afaka miandry aingam-panahy ianao, mila manaraka azy amin'ny tehina ianao." -Jack London
Fantatr'i Jack London fa ny fiandrasana aingam-panahy dia toy ny fiandrasana varatra hikotrokotroka. Aza miandry; ataovy fotsiny.
"Ny tantara lazaina amin'ny marina dia tsy holazaina diso mihitsy." -Jack Kerouac
Fantatry The About the Author Kerouac fa tsy misy fomba tsara na ratsy hitantara.
"Ny originalité dia tsinontsinona amin'ny fakana tahaka ny fitsarana." Voltaire
Tany am-piandohan'ny taona 1700 dia tsy nisy zavatra tena izy tany am-boalohany. Raiso amin'ny Voltaire izany, manavao sy manitatra hevitra no atao asa lehibe.
Ankafizo ny fizotrany. -Tiffany Shlain
Ny asa famoronana rehetra dia mety ho sarotra, fa ilay mpamokatra sarimihetsika Tiffany Shlain dia mahazo ireo fotoana tsy azo ihodivirana rehefa misaintsaina, ity torolàlana mazava sy tsotra ity. Raha tsy afaka mankafy ny fizotrany ianao, inona no ilaina amin'ny zavatra ataonao?
"Kopia daholo ny zava-drehetra." -Nora Efron
Fantatra amin'ny fampiasana fanaintainana manokana hamoronana zavakanto kanto, fantatr'i Nora Efron fa mety ho lasa tantara ny zava-drehetra.
"Ny ankamaroan'ny fanoratana tsara dia manomboka amin'ny drafitra voalohany mahatsiravina." -Anne Lamott
Hoy ny mpanoratra: “Ny fahalavorariana dia feon'ny mpampahory, fahavalon'ny vahoaka. Ho tery foana izy io ary ho very saina mandritra ny androm-piainanao, ary io no tena sakana eo aminao sy ny volavolan-dalàna voalohany. "
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Fanononana 8 tena manentana ny fanahy izay aroson'ny Adobe ho an'ireo mpandraharaha hanomboka ny taona
Olgui dia hoy izy:
Ny fitiavana no antony manosika tena ilaina amin'ny zavatra rehetra ataontsika.
Ny fihetsika feno fitiavana dia manasitrana sy manova izay vato misakana rehetra eo amin'ny lalan'ny fahatsapana tena.
Valiny tamin'i Olgui
Fahasalamana ho an'ny mpandraharaha rehetra!
Ho an'ireo izay mitady hanitatra, tiako ny milaza aminao ny zavatra niainako manokana niasa tao amin'ny Workana Studio (workana.com/agencias)
Tena nomeko anarana izy ireo satria reharehako ny habetsaky ny fahafaha-manao sy ny fisokafan'ny tsena nomen-dry zareo ahy ho freelancer, tena amporisihiko ho an'izay mitady izany.
Mahita foana ilay mitady. Ary tsy mahita na inona na inona afa-tsy ny tsara indrindra.
Faly 2016! :)